Njengobuchwephesha obuphambili bonxibelelwano lwangoku, inkomfa yevidiyo enenkcazo ephezulu inokufunyanwa kuphela ngokufumaneka kwi-Intanethi. Ithathe indawo yohambo lweshishini kwaye yaba yimodeli yamva nje yonxibelelwano, ephucula ukusebenza kakuhle konxibelelwano lwabasebenzisi kunye nolawulo, kunye...
Inamandla kangakanani i-multimedia yonke-in-one PC yokufundisa ngobuchule?
Ngophuhliso lwethekhinoloji yengcaciso, imultimedia ezidityaniswe zonke kwikhompyutha enye zibonelela ngeqonga elitsha lonxibelelwano lokufundisa kuhlaziyo lwekharityhulam entsha. I-EIBOARD multimedia yonke-kwi-PC enye yenza iklasi yakho ibe lula ngakumbi. Kulula ukusebenza ngeqhosha elinye ukutshintshela, iqhosha elinye kwi ...
Ukuvela kwezixhobo zokufundisa
Ibhodi yebhodi iye yalawula phantse iinkulungwane ezimbini. Ekuqaleni kweminyaka yee-1990, iinkxalabo malunga nothuli lwetshokhwe kunye nokungalungelani nokutya kwabangela ukuba abafundi batshintshele kwibhodi emhlophe. Utitshala wasincoma isixhobo esitsha, esibavumela ukuba baqaqambise baze bandise ikhosi ngemibala eyahlukahlukeneyo. Igumbi lokufundela lonke liyazuza...
Ukusebenzisana kunye nokulula kwebhodi ehlakaniphile
Ukubhala okuninzi okuchukumisayo kwe-EIBOARD ibhodi yepaneli esebenzayo ilungele ukuyila, ukuyila okuphefumlelweyo kwiiklasi zobugcisa. Qinisekisa ukuba abasebenzisi bayonwabela amava angenamsebenzi aziva ngathi ukubhala kunye nokuzoba ngeepen kunye neebrashi zokwenyani. Uninzi lweebhodi ezimhlophe eziSebenzayo zemveli zaqaphela amanqaku amabini kuphela ...
Iphaneli yeFlethi eSebenzayo idlala indima ebalulekileyo kwiNkomfa yanamhlanje!
ngu admin on 21-09-19
Iphaneli yeFlethi eSebenzayo idlala indima ebalulekileyo kwiNkomfa yanamhlanje! Iphaneli ye-EIBOARD esebenzisanayo ethe tyaba ixhomekeke kumandla ayo aguqukayo amagumbi enkomfa ale mihla ukwenza imeko-bume yokucinga eyenza kube lula ukuhamba ngokukhululekileyo izimvo. Ivumela ukusebenza kweqela ukuba kwandiswe kwaye ulwandle...
Ukufundisa ebhodini yesiNtu kuphelelwe lixesha, kwaye iphaneli yeflat esebenzisanayo ingene ngokusesikweni kwizikolo eziphambili!
ngu admin on 21-09-09
Ukufundisa kwebhodi yebhodi kuphelelwe lixesha, kwaye i-multimedia all-in-one interactive flat panel ingene ngokusesikweni kwizikolo eziphambili! Ngokuqhutywa yinkqubo yokwazisa ngemfundo, ziya zisanda izikolo eziyishiyayo indlela yokufundisa ebhodini, kwaye zixhotyiswe ngeseti ...
Hlalutya ukuba yintoni elula eziswa yi-LED Recordable Smart Blackboard kushishino lwezemfundo
Hlalutya ukuba yeyiphi na i-LED Recordable Smart Blackboard izisa lula kwishishini lezemfundo.
Yintoni i-LED Recordable Smart Blackboard?
ngu admin on 21-08-24
Yintoni i-LED Recordable Smart Blackboard? I-EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard sisisombululo samvanje sesi-5 seklasi yedijithali. Ukuba awukacaci ukuba yintoni i-perferming, nceda ufunde ulwazi olungezantsi, ngethemba lokuba luya kuphila. Isalathiso: 1. Kutheni i-LED Recordable Smart Blackbo...
Ingaba i-kindergarten multimedia ifundisa isikrini esichukumisayo siyibona njani iklasi ehlakaniphile?
Xa i-multimedia ifundisa isikrini sokuchukumisa ngokuthula yangena kwigumbi lokufundela enkulisa, yaphawula utshintsho olusisiseko kwindlela yemfundo kwi-kindergarten. Ukusuka kwiibhodi zebhodi eziqhelekileyo ezinothuli ukuya koomatshini bokufundisa bemultimedia abangenalo uthuli bengcaciso ephezulu, ukusuka kwi-cl...
Leliphi ixabiso lesicelo esibonelela ngesikrini esichukumisayo esisebenzisanayo?
Ukongeza ekunikezeni abantu ngeenkonzo ezahlukeneyo zombuzo wolwazi olufanelekileyo, i-Interactive touchscreen nayo ingabonisa ulwazi lwemveliso kunye nokukhangisa kumatshini nangaliphi na ixesha ngenkqubo yokukhutshwa kolwazi, kwaye inokutshintsha umxholo wokubonisa ngokuthanda kulawulo ngasemva...
Imisebenzi emithathu ye-multimedia ye-kindergarten yonke kwi-aplikeshini enye yebhodi
I-Multimedia efundisa zonke-in-one isisombululo sesicelo, yintoni imisebenzi ye-kindergarten yokufundisa yonke into? Ngokusetyenziswa kwemveliso yetekhnoloji enkulu ngakumbi kwicandelo lezemfundo, imfundo ehlakaniphile ikhula ngokukhawuleza. Njengesixhobo sokufaka, imultimedia ifundisa zonke-in-one mach...
Izinto eziluncedo EIBOARD Multimedia All-in-one PC
Kwinkalo yemfundo, iikholeji ezininzi kunye neeyunivesithi kwilizwe lonke ziye zamkela i-multimedia yonke-in-one PC njengesizukulwana esitsha sezixhobo zokufundisa. Xa kuthelekiswa nendlela yokufundisa yantlandlolo, i-multimedia yonke-kwi-PC enye yenza umxholo wokufundisa ucace ngakumbi, Yenza kwakhona ...